Ngaba kunokwenzeka ukuvuselela ubudlelwane
Ingaba kunokwenzeka ukuvuselela uthando ngumbuzo, mhlawumbi, uphazamisa umphefumlo ngamnye wethu. Emva koko, kukho, ubona, kukho amaxesha apho ufuna nje ukubuyisela uthando lwangaphambili, ukutshisa i-burnfire yemvakalelo endala, kwaye uqondise yonke ubudlelane kwenye iseshane
Masithi, bafazi kunye neentloko, qwalasela esi sihloko ekuqaleni.
Kutheni ulwalamano oludwenguliweyo. Izizathu eziphambili kukungcatsha komntu osuka kumaqabane. Ewe, ukuba sitshintsha, ngoko ke, ngaphandle kweengcinga ezimbi kakhulu, sihlushwa ngenxa yokwesaba ukungabanjwa. Kodwa ukuba iqabane liguqulwa, ke oku kuthiwa ukunyaniseka kunye kunye nesidima sesithunzi, kwenza ukuba udibaniso olulodwa. Ngaba kunokwenzeka xa kwenzeka ikhefu ngenxa yokunyanzela ukubuyisela uthando. Ukwenzela, ukuba into okanye umntu ekunyanzela ukuba uthengele. Yintoni enokuthi ibe - kwiimeko ezininzi kukho ukunganeliseki ngokwesini.
Uninzi lwabahlobo bam, khetha uthando kwicala kuphela kumgaqo - kunye nomyeni wam ndikhululekile, kodwa ngezocansi nangayiphi indlela. Ngokwemvelo, yonke imfihlo iyacaca, kwaye ngaphandle kokuba iya kwenza utshintsho ebomini bakho, iya kukwazi ukuphula ubudlelwane kunye neqabane. Ewe, kukho impendulo enye kuye - uyazigweba. Ewe, sinokuzama, ukuba isondo siza kuzisa ukwaneliseka kubo bonke abantu, kodwa bekungenako. Kwimeko enjalo, ukuba uqale ulwalamano kuthetha kuphela ukuba umntu onothando lwakhe ofuna ukubuyela okanye engenamigaqo, okanye uyakuthanda kakhulu, okanye nje ukuba naye naye, ukhululekile.
Ukuba imbangela yokuphuka yayikungcatsha komntu othandekayo. Eyona nto imbambano yesini kumadoda ayikho nakweyantoni kunye nekhanda labesifazane. Ukufumana ukuba kunokwenzeka yini ukuhlaziya ubuhlobo, qalela ukucinga malunga nokuphikisa. Okanye ngaba nje ngesondo, njengokuba amadoda esoloko esenzekayo - asela, akhululekile, anelisekile. Okanye ukungcatshiswa okufanayo komphefumlo kunye nobukho bekosikazi. Ukuba, ngokusweleka nje, wanelisekile iimfuno zakhe zomzimba, kwaye mhlawumbi yena ngokwakhe wavuma okanye waxelelwa "ngabahlobo", kwaye wuleza wavula umnyango. Emva koko khumbula rhoqo malunga nokuba akukho mntu kwihlabathi apho ubuncinci bodwa ebomini bengeke abe nesondo kwicala. Ngaba uyazi nokuba ucinga okanye ufune ukukholelwa kwinto ethile, ndiya kukuxelela ngokuthe ngqo-oku kwaye kuvuke. Kuphela, oko kuthi kuthi nawe, ibhinqa langoku.
Ukuba, mhlawumbi, elinye ibhinqa lalifuna ukuba libe yilala leeyure ezimbini, kwaye wayengacingi. Akayithandi kakhulu, andicinga ukuba kunjalo. Uvele nje unqotshwe ubuthathaka obuthathaka kwaye oku akufanelekanga ukwazi, kufuneka ube ngaphezu kwayo. Yintoni oyenzayo xa unyuliweyo unayo inkosikazi. Okokuqala, siya kucinga malunga noko ungamniki. Ngokuphathelele ngokwesondo, sifuna kwaye sinomdla kwaye sinomdla, nje ngezolo sasifuna ukukwenza ebhedeni, kwaye namhlanje silindele ixesha xa livusa ukuba lenzeke etafileni. Ngaba unayo yonke into? Mkhulu, ke masiqhubeke.
Madoda, banjengabantwana, bayakuthanda ukuba baya kuba novelwano kwaye baphulaphule. Ukuthetha, ntambama bafuna ukubona unina ngaphakathi kuwe. Ngaba uyamnyamekela? Omkhulu. Ngoku makhe sicinge ngesidima sethu, amadiliya ethu ukuba athethe kwaye athelekise kunye nenkosikazi yakhe. Emva koko sifumanisa ukuba kungcono kuwe okanye ngakumbi. Ukuba kulunge, ngokokuqala, siyazi apho sifuna khona, kwaye okwesibini, kutheni sithatha isicaka sethu sithi "Ndiyathanda ukuba unoyolo". Ukuba inkosikazi ibuhlungu kuwe - khetha nje intando yakho, njengoko yabakho abanye. Yintoni ekhona ukuzithuthuzela, inhlanhla kuye endleleni, kodwa siyaqhubeka kunye nawe, kwaye olu buhlobo aludingeki ukuba luhlaziywe.
Inketho yesibini yokuphula ulwalamano kukuba abantu abaqondi nje kuphela. Kwenzeka ukuba, ngaphandle kwakhe akakwazi ukwenza, kodwa kunye naye ngeyiphi indlela. Yintoni enokuyenza emva kwekhefu. Kwiimeko ezinjalo, kunokwenzeka ukuhlaziya ubudlelwane, kodwa ngenxa yoko, ngaphandle kwamagama athi "Ndifuna ukuba nawe, othandekayo wam," kufuneka ndikhawuleze ndithi "Ndiya kuzama ukukuqonda." Ukuqonda nokuzama omnye komnye kubaluleke kakhulu kulwalamano. Inkqubo yokwakha ukuqonda kwiintsebenziswano kukukhumbuza ukutshatyalaliswa kweWall Wall. Ukuphazamiseka, akunjalo. Okungakumbi, ukuba kungengaphezulu, kufuneka umntu athethe kwaye afune ukunyaniseka, ngokungathi umntu kufuneka aphulaphule imiba yombono aze afunde ukunyamezela. Kodwa unokuqalisa kwakhona ubuhlobo bakho.
Ngokuqinisekileyo, asizange siqwalasele zonke iimeko, kodwa isiphetho, ngasinye kwisinye sinye - Ukuba uyayithanda, uyazi njani kwaye unokuxolela, ukuba ukulungele ukunika yonke into kwaye ungabuzi nto into ekutshintshelweni - unokuqalisa kwakhona ubudlelwane, buyisela uthando lwakho lwangaphambili, konke oku kunokwenzeka.
Indlela yokuyeka udimazi kwinkampani enkulu
Indlela ukuma kwesifuba kuthinta ngayo intombazana
Iphupha uze uphumelele amaphupha
Kutheni abafana benjengotchi?
Indlela yokukhetha i-dishwasher ekhitshini
Isaladi ne-sipinashi isaladi
Oats kunye nokusetyenziswa kwayo
Ingulube ehhavini e-foil kunye ne-sleeve: zokupheka ezilula kakhulu nezilula kunye nesithombe
Iingcebiso ezihle ezithandekayo kubamama abalindayo
Ngaba ufuna ukufumana indoda enhle kakhulu esikolweni?
Indlela yokugcina izitya ngokuchanekileyo
Maskotkki mask for face and body
Ukuxhatshazwa kwamabhinqa amahle
Unyango lweenyawo ezicwangcisiweyo kubantwana
Amagama amahle ombulelo kubazali emtshatweni kunye neqela lokugqiba